LG G8 ThinQ ကိုStatesပြီ ၁၁ ရက်မှစ၍ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ရောင်းချမည်ဖြစ်သည် Androidsis
LG G8 ThinQ ကိုStatesပြီ ၁၁ ရက်မှစ၍ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်။ ကြိုတင်မှာယူမှုများစတင်ပြီးဖြစ်သည်
LG မှတရားဝင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည် G8 THINQ ဖေဖော်ဝါရီလကဘာစီလိုနာရှိ Mobile World Congress တွင်ကျင်းပခဲ့ပြီးယခုအခါကုမ္ပဏီသည်ယူအက်စ်တွင်ရှိနေသော်လည်းသင့်အိမ်တံခါးသို့ရောက်ရှိရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ။ သင်ကစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ဖုန်းဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကြေငြာလိုက်သည် ရရှိနိုင်Aprilပြီ 11.
စျေးနှုန်း $ 819.99 မှာစတင်ပါလိမ့်မယ် စတင်မိတ်ဆက်စဉ်ကန့်သတ်ထားသောအချိန်အတွက်ဒေါ်လာ ၁၅၀ အထိမိတ်ဆက်ပေးခြင်းနှင့်အတူ။ ကိရိယာကိုကမ်းလှမ်းသောရောင်းချသူများအတိအကျကအသေးစိတ်နှင့်အတူတူဖြစ်သည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအပေါ်ပိုမို။
LG G8 ThinQ ကို AT&T, Verizon, T-Mobile, Sprint, US ဆယ်လူလာ, Xfinity Mobile, Best Buy နှင့် B&H တို့မှရရှိနိုင်သည်။ ကြိုတင်အမှာစာများကိုမတ်လ ၂၉ ရက်တွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်.
LG G8 ThinQ သည်အနီရောင်ဖြစ်သည်
၎င်းကို Carmine Red၊ New Aurora Black နှင့် New Platinum Grey အရောင်ရွေးချယ်မှုများတွင်သယ်ဆောင်ရန်နှင့်လက်လီအရောင်းဆိုင်များအားလုံးကဤမျိုးကွဲအားလုံးကိုသိုလှောင်တော့မည်မဟုတ်ပါ။
အဲဒါကိုသတိရသင့်တယ် G8 ThinQ သည် chipset နှင့်အတူပါရှိသည် Snapdragon 855,6GB RAM၊ 128 GB သိုလှောင်နိုင်သောသိုလှောင်နိုင်မှု၊ နောက်ကင်မရာနှစ်ခု (ပုံမှန် 12 MPf/ 1.5 + 16 MP အကျယ်f/ 1.9)၊ 8 MP (f / 1.7) selfie ကင်မရာနှင့်ရှေ့ကင်မရာအာရုံခံကိရိယာတို့ပါဝင်သည် ကောင်းစွာ (ToF များအတွက်) ။ ဖုန်းကအလုပ်လုပ်ပါတယ် အန်းဒရွိုက်9Pie လျင်မြန်စွာအားသွင်းနိုင်သည့် ၃၅၀၀ mAh စွမ်းရည်ရှိသည့်ဘက်ထရီလည်းရှိသည်။
Huawei, Samsung နှင့် LG တို့သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်မူပိုင်ခွင့်မှတ်ပုံတင်အများဆုံးလျှောက်ထားသောကုမ္ပဏီများတွင် [+ Ranking]
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်း၏စတင်လွှတ်တင်ချိန်၌အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ တောင်ကိုရီးယားမှထုတ်လုပ်သူသည်ဖုန်းတွင်ရှိသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစပီကာကိုထုတ်ယူသည်။ ၎င်းအစား 32-bit Quad DAC ချစ်ပ်တစ်ခုရှိပြီး၎င်းမှတဆင့်အသံများကိုတုန်ခါစေရန်၎င်းမှတုန်ခါမှုကိုထုတ်လွှင့်ရန်တာ ၀ န်ရှိသည်။ ဒီအမှတ်တံဆိပ်ရဲ့ဒီမော်ဒယ်မှာဒီအင်္ဂါရပ်ဟာအများဆုံးပြောတတ်သည်မှာသေချာသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကာမူ၊ ၎င်းသည်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်၊ အသုံးပြုသူများသည်ဤဆန်းသစ်သောနည်းပညာကိုမည်သို့တုံ့ပြန်သည်ကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရ ဦး မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » LG G8 ThinQ ကိုStatesပြီ ၁၁ ရက်မှစ၍ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်။ ကြိုတင်မှာယူမှုများစတင်ပြီးဖြစ်သည်
Cure Hunters သည်စိတ်ရှုပ်စေသော retro style ဖြင့်ဆွဲဆောင်မှုရှိသော platformer တစ်ခုဖြစ်သည်
Google မှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွက် Android လုံခြုံရေးအစီရင်ခံစာကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်